Mikel Arteta Oo Go’aan Ka Gaadhay Dani Ceballos Kaddib Markii Uu Farriin Ka Helay Unai Emery – Gool24.Net
Mikel Arteta Oo Go’aan Ka Gaadhay Dani Ceballos Kaddib Markii Uu Farriin Ka Helay Unai Emery
Waqtigii Dani Ceballos ee Arsenal ayaa gebi ahaantiiba soo dhamaaday kaddib markii uu Mikel Arteta go’aan ku gaadhay in aanu kordhinin amaahdii sannadka ahayd ee uu laacibkani kula joogay Gunners.
Kubbad-sameeyahan Real Madrid ayuu tababarihii hore ee Unai Emery kaydka u diray isaga oo aan ku qancin bandhig-ciyaareedkiisa, laakiin markii uu Arteta shaqada qabtay ayuu nefis dareemay oo uu helay fursado uu ku ciyaaro.
Tababare Arteta oo damaciisu ahaa inuu waqti siiyo Ceballos oo uu tijaabiyo haddii uu Emery ku qaldanaa ayaa waxa laacibkan haleelay dhaawac taasina waxay keentay inuu yaraaday waqtigii ay isku heli lahaayeen gudaha garoonka illaa ugu dambayntii si buuxda go’aan looga gaadhay mustaqbalkiisa.
Sida uu qoray wargeyska Mirror oo soo xiganaya macluumaad lagu kalsoonaan karo oo uu helay, waxa uu Ceballos dib ugu laaban doonaa kooxdiisii hore ee Real Madrid marka uu dhamaado xili ciyaareedku, iyadoo aanay Arsenal wax gorgortan ah ka heli doonin mustaqbalkiisa ee kaliya ay sugi doonaan inta uu dhamaanayo qandaraaskiisu.
Wargeysku waxa kale oo uu sheegay inay wali jiraan rajooyin ah in heshiis ay labada dhinac ka gaadhi karaan in kaliya inta xili ciyaareedka ka dhiman heshiiskiisa la kordhiyo maadaama xilligii hore ay tartamadu dib uga dhacayaan, haddana waxa muuqata in Mikel Arteta aanu ku faraxsanayn in Emirates uu sii joogo Ceballos oo uu u arkayo in kaliya culays dhaqaale iyo tiro uu ku hayo.
Warku wuxuu intaa ku daray in Arteta uu ku farxi lahaa haddii waqtiga ugu horreysa ee suurtogalka ah uu laacibkani ugu laaban lahaa kooxdiisii hore.
Dhinaca kale, go’aanka Arteta ayaa yimid markii uu farriin ka helay tababarihii hore ee reer Spain ee Unai Emery oo xilli uu la hadlayay wargeyska AS yidhi: “Dani waa ciyaartoy tayadiisu cajiib tahay oo maskaxdiisuna sarrayso; Wuxuu doonayaa inuu guuleysto.
“Arsenal waxay u ahayd fursad weyn oo suuqa ah. Aniga ayuu ii ciyaaray, kaddibna wuu dhaawacmay oo muddo dheer ayuu maqnaa, hadda wuu soo kabtay, marka uu horyaalku bilaabmana , waxa hubaal ah inuu mar kale soo bandhigi doono tayadooyinkiisa.”
Ciyaaryahannada tirada badan ee khadka dhexe ay Arsenal ku haysato, sida Granit Xhaka, Mesut Ozil, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi iyo da’yarka hadda soo baxay Joe Willock iyo Emile Smith Rowe ayaa waxay Arteta ku riixi karayaan inuu iska fasaxo Ceballos si uu ugu laabto kooxdiisii Real Madrid.